ဟယ်လို - နတ်ဆိုးတို့၏အပြည့်အဝတညဉ့် | Apg29
ဟယ်လို - နတ်ဆိုးတို့၏အပြည့်အဝတညဉ့်
အမေရိကတိုက်မှပြောင်းရွှေ့အခြေချလာသောအခါ 1840 ခုနှစ်တွင်သူနှင့်အတူဒီဆဲလ်တစ်အခမ်းအနားအဓိကအားအိုငျးရစျကိုယူ။ အမေရိကတိုက်မှာ, ပင်ခရစ်ယာန်များသည်အကြားတစ်ဦးကြီးတွေအဘို့ဆောင်သောပွဲဖြစ်လာသည်နှင့်အောက်တိုဘာလ 31 ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကကနေ, ကတချို့အနှစ်အတွက် "အမေရိကန်" ပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်သစ်သားအတွက်ဖရုံသီး, စုန်း-set ကို, စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောမျက်နှာဖုံးများ, Scythe, မာရ်နတ်ချိတ်များနှင့်သင်္ချိုင်းမှတ်တိုင်၏ဆွန်း "ခေါင်းခွံ" နဲ့ဥရောပမှပြန်လာသောသိရသည်။
"ဒါကြောင့်သူတို့ကသတ်ပစ်ပုံကိုဖွင့်အဖွား, အဖေ, မောင်နှမကိုသူတို့သရဲတစ္ဆေ, အရိုးစုများနှင့်နတ်ဆိုးများအဖြစ်သေခြင်းမှပြန်ရောက်လျှင်, မိတ်ဆွေများတူလိမ့်မယ်!"
ဟယ်လိုဝင်းကလူအသင်း Celts ကြားတွင်အဓိကအားဖြင့်အစပြုထားပါတယ်တဲ့ Pre-ခရစ်ယာန်အယူမှားဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားပင်ဂလာတိထံမှအာရှမိုင်းနား, (ခေတ်သစ်တူရကီ) မှမူလကရှိကြ၏။
အဆိုပါ Celts, ဥရောပသမိုင်းတစ်ရွှေ့ပြောင်းဥရောပများ၏ထို့နောက်မြောက်ပိုင်းပိုငျးတှငျနထေိုငျခဲ့ပွီးနောကျလာသောအခါဘီစီ 500 ဝန်းကျင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်, ဖော်ပြခဲ့တဲ့နေကြသည်; အဆိုပါညုနှင့်အနောက်ပိုင်းဂျာမဏီပတ်လည်ရှိဧရိယာ။ ဥရောပမှာတော့သူတို့ကအမည် "gaeler" သို့မဟုတ် "ဇယားကွက်" ကသွားလေ၏။
အကြမ်းဖက်တိုးချဲ့အချိန်အတွင်းမှာ Celts အနောက်ဘက်ဘယ်လ်ဂျီယံဆီသို့ဦးတည်ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်တောင်ဘက်အီတလီနှင့်စပိန်မှအရှေ့သူတို့သည်နောက်တဖန်ဂလာတိအခြေချဘယ်မှာအာရှမိုင်းနားမှဗြိတိန်နိုင်ငံ, အထူးသဖြင့်အိုင်ယာလန်မှ, သူတို့ရဲ့ဧရိယာတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
"Galates" ကိုလည်း Celts များအတွက်ဂရိနာမကိုအမှီဖြစ်ခဲ့သည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့စကော့တလန်, ဝေလနယ်နှင့်အိုင်ယာလန်တို့သည် Celts ၏အိမျအဖြစ်မှတ်ခံရဖို့, အထူးသဖြင့်လာ၏။ ဆဲလ်တစ်ဘာသာရေးပွဲတော်များ, နှင့်အထွေထွေဘဝ, ထို druids (ပုရောဟိတ်-ရှငျဘုရငျတို့) ကမှော်အတတ်နှင့်အာဏာ၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းမှတဆင့်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အပင်၏ရိုးရာဓလေ့ယဇျပူဇျောမကြာခဏ Mistletoe နှင့်ချက်ပြုတ်အစားအစာ, ဝမ်းမြောက်စွာပေါင်မုန့်, ​​ဘုံဒြပ်စင်, ဒါပေမယ့်လည်းလူ့ယဇျပူဇျော (အဘယ်သူ၏အရိုးစု 1984 ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်မန်ချက်စတာအတွက် Lindow က Man ကိုကြည့်ပါ) ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။
အင်္ဂလန်မှာ Stonehenge မှော်အာဏာအလွန်ထိရောက်သောစုဆောင်းဖြစ်, "keltism" ၌ခေတ်မီရှာဖွေသူများအကြားစဉ်းစားသည်။ ဤသည်séancesနှင့်ရိုးရာဓလေ့ပွဲတော်များမှရှိရာခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုစုန်းနှင့် shamans ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Celts 1 နိုဝင်ဘာလအပေါ်စပါးရိတ်ရာကာလပွဲတော်နှင့်နှစ်သစ်ကူးကျင်းပခဲ့သည်။ ဒါဟာအယူမှားသည်သန့်ရှင်းသောနေ့ကဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပါတီသည်နွေရာသီ၏အဆုံးမှတ်သားခြင်းနှင့်အရှင်သေခံခြင်းနှင့်ကိုယ်နှိုက်ကဘဝအသစ်သည်အစအဦးအဓိပ်ပာယျရာသဘာဝဆောင်းဦးရာသီမှောင်မိုက် entry ကို။ မြေကြီးတပြင်မှာပြိုလဲအရွက်, အလတ်ဆတ်တဲ့မီးသီးအညှောက်ပေါက်။
နှစ်စဉ်ဒီအချိန်မှာ (လူ့ဇာတိအကြား) လောကနှင့်သေလွန်သောသူတို့သည်ကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျသောလူတို့အကြားကုလားကာအပါးလွှာဆုံးခဲ့ကြောင်းကိုလည်းဆိုလိုသညျ။ နှစ်သစ်ကူးမတိုင်မီညနေပိုင်းတွင်, ဒီ "သနျ့ရှငျးသောညဦးယံအချိန်" ကို "Hallows ဧဝကို" သူတို့ကောင်းမကောင်းစွမ်းအင်နှင့်ဝိညာဉ်များနှစ်ဦးစလုံးအနည်းဆုံးအတိတ်တစ်နှစ်ကာလအတွင်းသေဆုံးသွားသူများနှင့်အခြားသူများ, သေလွန်သောသူတို့သည်သောစိတ်ကူးရှိခဲ့သည့်အခါဆိုလိုသည်မှာအောက်တိုဘာ 31 - မှပြန်လာသော ဘဝနှင့်သေခြင်းဘုရား (အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်) Samhain ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာမြေကြီးတပြင်။ သူဠာနှင့်မရဏာနိုင်ငံအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
31 တွင်အောက်တိုဘာလထို့ကြောင့်သည်အသက်ရှင်သောသူအပေါင်းနှင့်သေလွန်သောသူတို့သည်ညဦးယံအချိန်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစ "ဘိုးဘေးည", "Anfädernasည" သို့မဟုတ် "ဘိုးဘေး '' ညဥ့်" ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သေလွန်သောသူတို့သည်နှင့်အခြားစွမ်းအင်နှင့်ဝိညာဉ်များ, ယနေ့ညနေပိုင်းတွင်ကမ္ဘာမြေမှရောက်လာသောအခါ, တလက်သူတို့ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်ရှိရာအရပ်တို့ကိုအားပြုသောကောငျးကြိုးအတှကျ lit ဖယောင်းတိုင်နှင့်မီးရှို့နေပုံများပေါ်တွင်သူတို့နှင့်အတူဖော်ထုတ်ရန်ခဲ့သဖြင့်သူတို့ကိုချွေးသိပ် သူတို့ကိုကဲ့သို့၎င်း, အခြားအပေါ်ကြည့်ဖို့သားကောင်တွေကိုရှုပ်ထွေးမှာတခါပြန်သူတို့ကိုတွှေ, သူတို့ကိုထက်ပိုဆိုးကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အိမ်တော်ကိုအေးမြစောင့်ရှောက်ရန်။
အလင်း, မီး, သွေး, သေခြင်းနှင့်မှောင်မိုက်၏သင်္ကေတများရောနှောခဲ့ကြသည်။ အဖြူနှင့်အနက်ရောင်မှော်နက်မှော်၏အစွန်းနှင့်အတူတွေ့ဆုံခဲ့ခဲ့ကြသည်။ Druids ထိုသို့သောဒုစရိုက်စုန်းပျံ လာ. အန္တရာယ်သတ္တဝါများတွှေမှကြီးမားသောမီးရှို lit ။ ပြည်သူ့အိမ်သူအိမ်သားရဲ့ကိုယ်ပိုင်မီးထွက်ထားမယ့်အစားမိမိတို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် Druids မီးလောင်မှုအားဖြင့်အသစ်သောမီးကို download လုပ်ပါဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
ဝိညာဉ်တော်သည်ကမ္ဘာမှလာသောသူများသည်, နှစ်ဦးစလုံးဥပမာ, နှစ်သစ်ကူးအဘို့အလာမယ့်တစ်နှစ်အတွင်းကျဆုံးနှင့်အချိန်သည်ဆောင်းကာလနှင့်ကောင်းမွန်သောကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်အလင်း၏ပြန်လာ၏ဂတိလက်ဆောင်တွေပေးနိုင်တယ်လို့ - သို့မဟုတ်ဤညနပေိုငျး / ညဥ့်သေဆုံးတဲ့သူတွေကို၏အသက်ဝိညာဉ်ကို download လုပ်ပါ, ပင်လူ့ပူဇော်သောယဇ်လိုအပ် နှစ်သစ်။ ဒါဟာစိုးရိမ်ပူပန်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသို့မဟုတ်အမင်္ဂလာ။
ဤတွင်တံခါးနားမှာတချို့ခေတ်ပြိုင်သားသမီးရဲ့ပြဿနာများကို၏အခြေခံအားလုံးသူတော်စင်နေ့မတိုင်မီညဉ့်သည်: "Candy သို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကား", "Tricks-or-အားရစရာ" ( "Spratt သို့မဟုတ်ဆုကျေးဇူး") ။ Samhain အဆိုပါလှူခြင်းနှင့်ဖှယျ Reaper နှစ်ဦးစလုံးကိုပြောသည်ခံခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်လေးစားရန်မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ အားလုံးသူတော်စင်နေ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းရဲ့ပွဲ, အယူမှားဆဲလ်တစ်စပါးရိတ်ရာကာလပွဲတော်ကျော်အောင်မြင်မှုမှထလေ၏။
တစ်ခုနှင့်အစောပိုင်းအိုငျးရစျခရစ်ယာန်ထုံးစံအိမ်ပေါင်မုန့်အဘို့တောင်းပန်မှ, အပြန်, သေလွန်သောသူတို့သည်ဆွေမျိုးသားချင်း၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ တချို့ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်, "သတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်နှင့်သေလွန်သောသူတို့သည်ညဥ့်" ဟုအယူမှားထင်နိုင်အောင်ခဲ့သည် - ပင်အယူမှားသန့်ရှင်းသောအာရှရပင်နှင့်မြင့်မားသောအရပ်တို့ကိုခုတ်လှဲခြင်းနှင့်ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များနှင့်သုဿာန်နဲ့အစားထိုးခဲ့ - နောက်ဆုံးမှာတော့တစ်ဦးရှုပ်ထွေးမှုများ, ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးမှော်အတတ်အဖြေ "förkristnandet" ရှိခဲ့သည် တစ်နည်းဟယ်လိုဝင်းထဲမှာ "Allahelgonaafton" ။
အမေရိကတိုက်မှပြောင်းရွှေ့အခြေချလာသောအခါ 1840 ခုနှစ်တွင်သူနှင့်အတူဒီဆဲလ်တစ်အခမ်းအနားအဓိကအားအိုငျးရစျကိုယူ။ အမေရိကတိုက်မှာ, ပင်ခရစ်ယာန်များသည်အကြားတစ်ဦးကြီးတွေအဘို့ဆောင်သောပွဲဖြစ်လာသည်နှင့်အောက်တိုဘာလ 31 ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကကနေ, ကတချို့အနှစ်အတွက် "အမေရိကန်" ရှိပါတယ်, ပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်သစ်သားအတွက် * စုန်း-set ကို, စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောမျက်နှာဖုံးများ, Scythe, မာရ်နတ်ချိတ်များနှင့်သင်္ချိုင်းမှတ်တိုင်ဖရုံသီး၏ဆွန်း "ခေါင်းခွံ" နဲ့ဥရောပပြန်သွားကြ၏။
ဒေတာတချို့ 1991 ခုနှစ်ဆွီဒင်အတွက်ပစ်လွှတ်စတင်အဖြစ်ပြက်လုံးတွေနဲ့ကုမ္ပဏီခဲ့အကြံပြုအပ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကတစ်အစားအစာကွင်းဆက်အနေဖြင့်တစ်ဦးကလက်ကမ်းကြော်ငြာခဲ့: "ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့spökkompisarနှင့်မာရ်နတ်မိတ်ဆွေများကတကယ့်ဟယ်လိုဝင်းပါတီမှစုသိမ်းခြင်းနှင့်နတ်ဆိုးတို့၏အပြည့်အဝတညဉ့်အဘို့အဆင်သင့်မရ။ "
အကြောင်း, သူတို့ကိုသတ်ဘယ်လိုဖွင့်အဖွား, အဖေ, မောင်နှမကိုသူတို့သရဲတစ္ဆေ, အရိုးစုများနှင့်နတ်ဆိုးများအဖြစ်သေခြင်းမှပြန်ရောက်လျှင်ဒါ, မိတ်ဆွေများတူလိမ့်မယ်! သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အသေခံတော်မူသောမိမိတို့ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများအတုယူချင်လျှင် ပို. မှော်အတတ်အတွက်ဒါခေါ်ကောင်းသောဝိညာဉ်များနှင့် "ကောင်းကင်တမန်များ" နဲ့တူပြီးတော့မဝတ်စားဆင်ယင် - နှင့်ယခုပြန်မယ့်ဆိုလိုတယ်?
သိသာထင်ရှားတဲ့အများဆုံးဆွီဒင်နိုင်ငံသားများအဘို့ဟယ်လိုပွဲကျင်းပမယ့်တစ်ဦးအပြစ်မဲ့ဂိမ်းကိုမဆိုမရှိဘဲနောက်ကွယ်မှအခြားအရာတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကြတယ်။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်မှောင်မိုက်သင့်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြခံရဖို့မသက်မသာဖြစ်သနည်း ခြောကျလှနျ့အမြစ်တွယ်စိုးရိမ်စိတ်စာလုံးပေါင်းပါသလဲ?
အမှန်တကယ်မသေမှီကွာတာဝန်ကနေမရနိုင်ရန်အတွက်သေမင်းနှင့်လူကိုနောက်နေ? ဟယ်လိုအဖြစ်မှန်ကနေလိုအပ်သောထွက်ပေါက်အဖြစ်ရှုမြင်သင့်သနည်း ဟုတ်ပါတယ်, ဟယ်လိုအဘယ်သူမျှမအပေါင်းတို့, ခရစ်ယာန်တစ်ဦး၏အနည်းဆုံးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသင့်ကြောင်းအဟောင်းအယူမှားထုံးစံထက် ပို. အချည်းနှီးဖြစ်၏။ သေခြင်းနှင့်မကောင်းသောအဘုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းကလေးများအကြမ်းဖက်မှုများကိုစှနျ့လှတျဖို့သင်ယူပါ။ ထိုသို့အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးသားသမီးရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကိုစဉ်းစားအမြိုးသားတို့ကာကွယ်အကြောင်းကိုဤမျှလောက်ပြော၏။ လူ့ခြင်းနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်၏အမည်, တစ်ချိန်တည်းမှာယေဘုယျအတွက်မီဒီယာနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းကျောင်းများတွင်သေခံခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုသင်္ကေတများဤကလေးများပူဇော်ကြ၏။ နှစ်ချက်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အ naivety, ငါဆိုသည်ကား, ဘယ်လိုကြီးမြတ်တဲ့ပါတီဘို့ငါတို့လိုအပ်ချက်ကဒီမှာဆွီဒင်ထက်ရှည်လျားပြီးမှောင်မိုက်ဆောင်းဦးရာသီကာလအတွင်းဟယ်လိုကောင်းတစ်ဥပမာမဟုတ်ပါ!
ဝိညာဉ်တော်သည်လောကရှိနှင့်ဤအယူမှားကလေးသည်-မိတျဆှေသဘောမရှိသောညနပေိုငျးအပေါ်အများပြည်သူစကားစစ်ထိုးပွဲအတွက်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်မှတ်ပေးပါ။ သို့သော်အမြော်အမြင်ရှိရှိခရစ်ယာန်တစ်ဦးအတွက်ဝတ်စုံကလေးများကစားနေစဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်။ သငျသညျဟယ်လိုဆင်နွှဲကြဘူးကြောင်း, ကြင်နာစွာဥပမာ, ပြောပါ။ ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါဘူးထက်ပိုခက်။ "ခရစ်ယာန်" ဟယ်လိုဖို့ကြိုးစားနေငါအခြားတစ်ဖက်ကိုဆိုလိုတာ, သွားကြဖို့မှားယွင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
* တစ်အိုင်းရစ်ဒဏ္ဍာရီအဆိုအရဂျက်အမည်ရှိသောအဓမ္မပန်းပဲဆရာရှိ၏။ ဂျက်မာရ်နတ်လှည့်ဖြားခြင်းနှင့်သူ့ကိုမိမိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုတောင်းဆိုဖို့ဘယ်တော့မှကတိပေးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကနောက်ဆုံးတော့သေဆုံးသည့်အခါသူသည်မြေကြီးပေါ်မှာအလွန်စေသောကြောင့်၎င်း, သူကောင်းကင်သို့ဝင်ပေါက်ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်သူလည်းမာရျနတျနှငျ့အထကျကိုအဆုံးသတ်နိုင်သူမြေကြီးပေါ်မှာလှည့်လည်ဝိညာဉျသရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သူကအနည်းဆုံးတစ်ဦးမီးအိမ်ရဖို့မာရျနတျဟုမေး၏။ မာရျနတျ la လာသောအခါဂျက်ကိုစားဆွန်းမုန်လာဉဝါအတွက်သေးငယ်တဲ့မီး။ ထိုအချိန်မှစ. သူသည်မိမိအ "မီးအိမ်" နဲ့ restlessly န်းကျင် wanders နှင့်နေဖို့နေရာတစ်နေရာရှာဖွေနေ။ ဂိမ်းများနှင့်လူထုပုံပြင်များမှာတော့အထူးသဖြင့်အတူနတ်ဆိုးကွာတွှေဖို့ရည်မှန်း, "ဂျက်-o-မီးအိမ်" ဘို့တထိုကဲ့သို့သောဆီမီးခွက်ကိုခေါ်။